မည်သည် Android နဲ့မဆို Gmail account နဲ့ facebook account ဖွင့်နည်း ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
မည်သည် Android နဲ့မဆို Gmail account နဲ့ facebook account ဖွင့်နည်း
Author: lubo601 | 2:07 PM | No မှတ်ချက် |
မင်းပြားသားလေးနည်းပညာ စုစဉ်းမူ့added 12 new photos.
မြန်မာနိုင်ငံက Facebook Account အသစ်ကို ဖွင့်ရတွင် ဖုန်းနံပတ်တောင်းတာမျိုကြောင်း တချို့ က ဖုန်းနံပတ် မပေးနိုင်တာကြောင်း အကောက့် ပျတ်တာမျိုးတော့ ဖွင့်မရတာမျိုးတော့ လော့ကျကျ သွားတာမျိုးတော့ကြောင်း စိတ်အနောက်ယှက် ဖြစ်ခဲရတဲ့သူများအတွက် Confirm Code. ကို အလွယ်တကူ gmail ကနေ တောင်းယူပီး Facebook Account အသစ်ကို ဖုန်းဖြင့် အလွယ်ကူဆုံး မိမိကိုယ်တိုင် ကျွမ်းကျင်စွာ ဖွင့်တက်စေရန်
ကျတော် မင်းပြားသားလေးနည်းပညာစုစဉ်းမူ့ မှ စမ်းသိပ် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီ post က သိပီးသား ကျွမ်းကျင်ပီးသား ဆရာသမားတွေအတွက်တော့ ရယ်ချင်စရာ post တစ်ခု ဖြစ်ချင်ရင် ဖြစ်နေပါလိမ်မယ်။ ကျတော်လို နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာဆိုဘာမှ နားမလည်တဲ့သူတွေအတွက် ရည်ရွည်ပါသည်။
ဒီ post ကို ရေးသားရခြင်း အကြောင်းရင်းက တစ်ချိုသော ကိုကိုမမ ညီလေး ညီမလေး တော့ Facebook Account ၀န်ဆောင်မူ့ပေးသည်ဆိုတဲ့page တစ်ချိုတော့တွင် Facebook Account တစ်ခုကို ၁၀၀၀ ၂၀၀၀ ၃၀၀၀ ပေးရတာမျိုးတော့ မိမိတို့ နီးစပ်ရာ ဆိုင်တစ်ချိုမှာ ၀န်ဆောင်ခပေးပီး သွားဖွင့်တာမျိုတော့ကို ကျတော် တွေ့ မြင်ရနေတာကြောင်း ဒီ post ကို ရေးသားရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဲဒါနဲ့တစ်ခုပြေား၇အုမေ ၀န်ဆောင်ခဖြင့် Facebook Account ဖွင့်ပေးနေတဲ့ဝန်ဆောင်မူ့ များကို ၇ည်၇ွည်ပီးေ၇းသားထားခြင်း လုံးဝ မဟုတ်ပါ၇န် တောင်းပင်အပ်ပါသည် ကျတော်က အခုလို တိုးတက်လာတဲ့အိုင်တီနည်းပညာ ခောတ် ကြီးမှာ မိမိကိုယ်တိုင် နားလည်သဘောပေါက့်စေ၇န် အတွက် ဒီ post ကို ရေးသားလိုက်ရခြင်းပါ မည်သည် တဦးတယောက်ကိုမှ ထိခိုက်စေလိုတဲ့စိတ်ဖြင့် ရေးသားထားခြင် လုံးဝ မဟုတ်ပါ။
ဒီ post က မိမိအတွက် တန်ဖို့ မရှိခဲရင်တောင် မိမိတို့Facebook Account ထဲက fri တွေ သိရှိစေရန် share ဖြင့် ကူညီပေးသွားစေချင်ပါသည် ။
Facebook account ဖွင့်နည်းကိုတော့ ဒီလင်းမှာ တင်ပေးထားပါတယ် https://m.facebook.com/story.php… Gmail account တစ်ခု လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပထမဦးဆုံး Gmail account ကို Phone ပေါ်ကနေဖွင့်ပြပါမယ်။
အောက့်မှာ ပုံလေးနဲ့ပြထားတဲ့အဆင့် ၁ ဆိုတဲ့Phone ပေါ်က Setting > ကို သွားလိုက်ပါ
အောက့်မှာ ပုံလေးနဲ့ပြထားတဲ့အဆင့် ၂ ဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ပြထားတဲ့Add account ကို နှိပ်ပါ
ပီးရင် အဆင့် ၃ ဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ပြထားတဲ့Google ကိုရွေးပါ။
အဆင့် ၃ ကို ပီးသွားရင် အဆင့် ၄ ဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ပြထားတဲ့Existing လား new လားရွေးခိုင်းပါမယ်
အခုက အသစ်ဖွင့်မှာဆိုတော့ new ကို ကျတော် ပုံလေးနဲ့ပြထားတဲ့new ကို ဝင်ပါ။
အဆင့် ၄ ကို ပီးသွားရင် အဆင့် ၅ ဆိုတဲ့ပုံလေးနဲ့ပြထားတဲ့Fist name မှာ မိမိကြိုက်ရာ နာမည်တစ်လုံးထည့်ပါ။
အောက့်က List name မှာလေး ကိုကြိုက်ရာဖြည့်ပါ Next သော်လေးကောင်း ဒါမှမယုတ် ကျတော် ပုံလေးနဲ့ပြထားတာကို နှိပ်လိုက်ပါ ဆက်နှိပ်ပါ။
အဆင့် ၆ မှာပုံလေးနဲ့ပြထားတဲ့Creat email adress မှာ ကိုယ်ကြိုက်တာတစ်ခုခုရေးပေးလိုက်ပါ
ကိုယ်ပေးတဲ့ adress က နဂိုရှိနှင့်ပြီးသားဆိုရင်တော့ အခုလိုမရဘူးပြောမှာပါ။
နောက် adress တစ်ခုထပ်ရေးပြီး Try again ကို ဆက်နှိပ်ပါ ok တယ်ဆိုရင်တော့
အဆင့် ရ လို့ပုံလေးနဲ့ပြထားတဲ့password မှာ မိမိမှတ်မိစေမယ့် password ပေးပါ နှစ်ခါရေးပေးပြီး Next သော်လေးကောင်း ကျတော် ပြထားတဲ့နေရာသော်လေးကောင်း နှိပ်ပါ။
Recovery email မှာ recovery လုပ်၍အဆင်ပြေမယ့် email adress တစ်ခုပေး လိုက်ပါ။ အောက်ကဟာတွေကတော့ အဆင်ပြေသလို ကြည့်လုပ်လိုက်ပါ Next ကိုပဲ ဆက်နှိပ်လိုက်ပါ ။
Finish creating account မှာ finish teacher s name ကို ရွေး ပေးလိုက်ပါ ။ စာလိမ်တွေရိုက်တဲ့ box ကျလာပါမယ်။ အပေါ်ကစာတွေ ကူးထည့်ပေးပြီး Next ကိုနှိပ်လိုက်ပါ ။
Entertainment မှာ Not Now ပေါ့ဗျ။ ကဲ အခုဆိုရင်တော့ Gmail account တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ ဖွင့်လို့ပြီးပါပြီဗျာ Samsung ဖုန်း ကိုင်းထားသူတွေကတော့ ကျတော် ဒီလင်းမှာ